musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Airbus inonunura yekutanga A220 jeti kuAir France
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Iyo A220 ndiyo yega ndege yechinangwa-yakavakirwa pamusika wechigaro we100-150 uye inounza pamwe nyika-ye-iyo-iyo aerodynamics, zvigadzirwa zvemberi uye Pratt & Whitney yazvino-chizvarwa yakagadzirirwa injini turbofan.
Iyo A220 ndiyo inonyatso shanda uye inoshanduka nendege mune 100 kusvika 150 chigaro chemusika chikamu nhasi.
Yekutanga Air France A220-300 inozo shandiswa pane yayo yepakati-dhonza network kubva mwaka 2021 mwaka wechando.
Iine huwandu hunosvika 3,450 nm (6,390 km), iyo A220 inopa ndege dzinowedzerwa kushanduka kushanduka.
Air France yakagamuchira yayo yekutanga A220-300 kubva kuodha ye60 ndege dzerudzi, iyo hombe A220 odha kubva kuEuropean mutakuri. Ndege yakaunzwa kubva kuAirbus 'yekupedzisira gungano mutsara kuMirabel, Quebec, Canada uye yakaziviswa zviri pamutemo kuruzhinji panguva yemhemberero yakaitirwa kuParis Charles-De-Gaulle Airport.
Airbus A220 ndiyo ndege inoshanda zvakanyanya uye inochinja-chinja mune chikamu chemaketi zana kusvika zana nemakumi mashanu nhasi. Kuvandudzwa kweAir France imwe-aisle zvikepe neiyi yazvino chizvarwa ndege ichawedzera kushanda pamwe chete nevatengi nyaradzo uye kutsigira Air France kuzadzisa zvinangwa zvayo zvemhoteredzo uye zvinangwa zvekusimudzira.
wokutanga Air France A220-300 ichave ichishandiswa pane yayo yepakati-dhonza network kubva mwaka 2021 mwaka wechando. Parizvino, Air France inoshandisa zvikepe zve136 Airbus ndege. Air France iri kuvandudza zvekare ngarava dzayo dzekutakura-refu, uye yatotora kutakura kwema11 A350s kunze kwekuraira kwema38.
Iyo Air France A220-300 kabhini inogadzirirwa mune imwechete-kirasi dhizaini kuti ugamuchire vanogarika 148 vafambi. Ichipa yepamusoro imwe-aisle nyaradzo, ine yakafaranuka zvigaro zveganda, mahwindo akakurisa uye anosvika makumi maviri muzana nzvimbo yepamusoro yepamusoro stowage nzvimbo pamunhu mufambi, iyo Air France A20 zvakare inoratidzira izere nekubatana kweWiFi mukati mese kabhini uye maviri masokisi eUSB pachigaro chega chega chemutyairi.
Iyo A220 ndiyo yega ndege yechinangwa-yakavakirwa pamusika wechigaro we100-150 uye inounza pamwe nyika-ye-iyo-iyo aerodynamics, zvigadzirwa zvemberi uye Pratt & Whitney yazvino-chizvarwa yakagadzirirwa injini turbofan. Iine huwandu hunosvika 3,450 nm (6,390 km), iyo A220 inopa ndege dzinowedzerwa kushanduka kushanduka. Iyo A220 inounza kusvika ku25% yakaderera mafuta kutsva uye CO2 emissions pachigaro kana ichienzaniswa neyekare chizvarwa ndege, uye 50% yakaderera NOx emissions kupfuura indasitiri zviyero. Uye zvakare, iyo ruzha rwekutsika kwendege inoderedzwa ne50% zvichienzaniswa nendege dzechizvarwa chekare - zvichiita kuti A220 ive muvakidzani akanaka kutenderedza nhandare.
Sezvo kupera kwaNyamavhuvhu, anopfuura 170 A220s akaendeswa kune vanoshanda gumi nerimwe.